सडक दुर्घटनामा कलाकार एल.बि पुनको निधन । « Np Online TV
सडक दुर्घटनामा कलाकार एल.बि पुनको निधन ।
अर्घाखाँची जिल्लाको साबिक गोखंगा हाल मालारानी ९ सेपाने निवासी एल. बि. पुनको सडक दुर्घटनामा भदौ १९ गते साँझ मृत्यु भएको छ।
आफैले चलाई रहेको मोटरसाइकललाई नेपाली सेनाको ट्रकले एक्कासि ठक्कर दिए पछि गम्भीर घाइते भएका निजको ट्रमा सेन्टरमा मृत्यु भएको थियो।
आफ्नो कलाकारिता लाई ब्यबसायिक रूपमा अंगाली रहेका निज पुनको मोटरसाइकल दुर्घटना भै वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा उपचारको क्रममा निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान भैरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ।
नेपाली लोक ,कला संस्कृतिका एक अभियन्ता पुन ले काठमाडौमा बसेर लोक ,दोहोरी ,नृत्य र अभिनयमा सक्रिय रूपमा लागेका ब्यक्तित्व हुन ।
चलचित्र‘१२ सत्ताइस’को ट्रेलर सार्वजनिक